Chirevo chekuvanzika chakapedzisira kuvandudzwa musi wa 28/06/2021 uye chinoshanda kuvagari nevagari vepamutemo vanogara muEuropean Economic Area.
Mune ichi chirevo chezvekuvanzika tinotsanangura zvatinoita nedata ratinowana pamusoro pako kuburikidza https://comme-un-pro.fr. Tinokurudzira kuti uverenge chirevo ichi zvakanyatsonaka. Mukugadzirisa kwedu, isu tinoteerera zvinodiwa nemutemo wepachivande. Izvi zvinoreva, pakati pezvimwe zvinhu, kuti:
isu tinonyatsoratidza zvinangwa zvatinoita isu pachedu data. Isu tinoita izvi tichishandisa ichi chirevo chekuvanzika.
isu tinovavarira kudzikisira kuunganidzwa kwedu kwemunhu data chete kune zvemunhu data zvakakosha kune zviri pamutemo zvinangwa;
isu tinotanga takumbira mvumo yako yakajeka yekugadzirisa dhata rako pachako mune zviitiko zvinoda kubvumidzwa kwako;
isu tinotora matanho akakodzera ekuchengetedza data rako pachako, uye isu tinoda zvakafanana nemapati anotigadzirira data revanhu;
tinoremekedza kodzero yako yekutarisa, kururamisa kana kudzima data rako pachako kana iwe uchikumbira.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva chaizvo data ratinochengeta, ndapota taura nesu.
1. Chinangwa, dhata uye nguva yekuchengetedza
1.1 Nyora uye ongorora manhamba ekuvandudzwa kwewebhusaiti.
Nechinangwa ichi, isu tinoshandisa inotevera data:
Hwaro hwatinogona kugadzirisa iyi data ndewokuti:
Iyo nguva yekutaura
Isu tinochengeta iyi data kusvika kupera kwebasa.
1.2 Kugona kupa zvigadzirwa zvakagadzirwa uye masevhisi
2. Kugovana nemamwe mapato
Isu tinongogovana iyi data nemaprosesa uye nevamwe vatatu mapato ayo mvumo yedata zvidzidzo zvinofanirwa kuwanikwa. Izvi zvine chekuita nechinotevera chikamu (s):
Chinangwa: kudyidzana kwebhizinesi
Iyo data: Ruzivo rwune chekuita nekufamba uye nezviito zvinoitwa pamasaiti evamwe.
Yedu webhusaiti inoshandisa makuki. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve makuki, ndapota tarisa kune edu Cookies mutemo.
Isu tinoteedzera nhamba dzisingazivikanwe kuti uwane pfungwa yekuti kangani uye vashanyi vanoshandisa webhusaiti yedu.Kubatanidzwa kweakazara IP kero yakavharwa nesu.
Isu takazvipira kune chengetedzo yemunhu data. Isu tinotora matanho akakodzera ekudzivirira kudzora kushungurudzwa uye kusatenderwa kuwana kune yako data. Izvi zvinoona kuti ivo chete vanhu vanodiwa ndivo vanokwanisa kuwana yako data, iyo kuwana kune iyo data inodzivirirwa uye kuti edu ekuchengetedza matanho anowanzo kuongororwa.
6. Webhusaiti yechitatu bato
Ichi chirevo chekuvanzika hachishande kune echitatu mapato mawebhusaiti akabatanidzwa nehukama pane yedu webhusaiti Hatigone kuvimbisa kuti mapato aya echitatu anobata yako data nenzira yakavimbika kana yakachengeteka. Tinokurudzira kuti iwe uverenge zvirevo zvakavanzika zveaya mawebhusaiti usati waashandisa.
7. Shanduko kune ichi chirevo chekuvanzika
Isu tinochengetera kodzero yekugadzirisa chirevo ichi chezvekuvanzika. Zvinokurudzirwa kuti iwe ugare uchiongorora chirevo ichi chekuvanzika kuitira kuti uzive chero shanduko dzinogona kuitika. Uye zvakare, isu tinoshingairira kukuzivisa iwe kana zvichibvira.
8. Kuwana uye kugadzirisa data rako
Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva kuti ndezvipi zvemunhu dhata zvatinazvo nezvako, ndapota taura nesu. Unogona kutirovera runhare uchishandisa ruzivo pazasi. Une kodzero dzinotevera:
Ita shuwa kuti iwe unogara uchijekesa kuti iwe ndiwe ani, kuitira kuti tive nechokwadi chekuti data remunhu asiri iye harisi kuchinjwa kana kudzimwa.
9. Ita chichemo
Kana iwe usina kugutsikana nenzira yatiri kubata nayo (chichemo pamusoro) kugadziriswa kwe data rako, une mvumo yekuisa chichemo kune vane masimba ekuchengetedza data.
10. Dziviriro yemukuru
Wedu wekuchengetedza data officer akanyoreswa pamwe nevakuru vekuchengetedza data mune yenhengo yenhengo yeEU. Kana iwe uine chero mibvunzo kana zvikumbiro zvine chekuita nezve zvakavanzika chirevo kana zveDziviriro Dhipatimendi, unogona kubata Tranquillus, kuburikidza kana tranquillus.france@comme-un-pro.fr.